Naniraka hampanapaka ny lohan'i Joany i Herôda...
Naseho ny : 1 aogositra 2020
Sabotsy 01 aogositra 2020 — Herinandro faha-17 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 14, 1-12 — Ampianaro ahy, ry Tompo, ny lalànao, ary tariho ho amin'ny lala-mahitsy aho.
Ry kristianina havana, mankalaza an’i Masindahy Alphonse avy any Liguori ny Fiangonana anio, anisan’ny hatsaram-pananahy alain-tahaka aminy, dia izy nanolo-tena hitory sy hanambara an’i Jesoa ho an’ireo tsy mahalala azy.
Noho izany, ny Evanjely anio dia misarika antsika hitana sy hijoro amin’ny marina izay efa nampahalalaina antsika hatramin’ny fahakelintsika. Satria, ny filazan’i Masindahy Joany Baptista ny marina tamin’i Heroda ny tsy tokony hanambadiany ny vadin’i Filipo ralahany dia nahatonga fialonana tamin-drenin’i Zanakavavin’i Herodiada izany. Ny anton’izany dia noho ny fitiavan-tena diso tafahoatra tao amin’ity vehivavy renim-pianakavina iray ity, ka tsy nisalasala nampaniraka ny hanampahana ny lohan’i Joany Batista tao an-tranomaizina, izany hoe : nanelingeliana izay mety ho hasambarany ny fisian’i Joany Baptista nijoro sy nitana ny marina ka aleony namono azy toy izay hihaino ny feon’Andriamanitra.
Tsy mifanalavitra amin’izany ny endriky ny fiainantsika ankehitriny, satria maro ireo trangam-piaianana hita amin’izao fotoan-tsarotra andalovan’ny areti-mangringana eto amin’ny tanintsika izao, no araraotin’ny ireo tsy matahotody hangalana tombontsoa, fa hamonoana ny olomarina kosa hahazaoana hasambarana. Ny tena kristianina dia mifampitsinjo ary manao ny marina mandrakariva. Raha izany àry no jerena, dia te hiteny amintsika kristianina i Jesoa hoe : amin’izay mety teny na fanapahan-kevitra anananao fahefana dia ataovy am-pandanjalanjana tsara sao maningotra ain’olona maro na mamono mivantana mihitsy àry. Koa hoy ny Ntaolo razantsika hoe : avadibadio impito ny lela vao miteny mba tsy hanimba ny hafa. Angatao àry ny Fanahin’Andriamnitra hiasa ao amintsika mba hitondra vokatra maharitra isika.